Izao ary no hahafantarako fa olo-marina ianareo: Dia lasa nanontany tamin’i Jehovah izy. Fa ny aminao kosa, dia hitandrina ny fanekeko ianao, dia ianao sy ny taranakao mandimby anao hatramin’ny taranaka fara mandimby. Aoka ho lasany ho azy, fandrao ho afa-baraka isika; indro, efa nampanateriko ity zanak’osy ity, nefa ianao tsy nahita an-dravehivavy. Moa zavatra kely va ny nakanao ny vadiko?
Hemdana sy Esbana sy Jitrana ary Kerana. Satria efa nihaino ny feon’ny vadinao ianao, ka nihinananao ny hazo, izay nandrarako anao hoe: Miverena any amin’ny tompovavinao ka miareta izay ataony aminao. Izaho no Jehovah, Andriamanitr’i Abrahama rainao sy Andriamanitr’Isaka; ny tany izay andrianao dia homeko anao sy ny taranakao; 14 ary ny taranakao ho be tahaka ny vovoka amin’ny tany; gaiboly hiely any andrefana sy any atsinanana ary any avaratra sy any atsimo ianao; ary aminao sy ny taranakao no hitahiana baibol firenena rehetra ambonin’ny tany. Aiza ireo lehilahy vao tonga tato aminao izao alina izao?
Inona ary no homenao ahy, raha handry amiko ianao? Aza matahotra, ry Abrama; Izaho no ampinganao sy valimpitia lehibe indrindra ho anao.
Indro, eo anoloanao ny taniko; mitoera eo amin’izay tianao. Aoka handry aminao ihany ary izy anio alina noho ny dodaiman’ny zanakao. Iza indray moa ianao?
Indro, fa efa sahy niteny tamin’ny Tompo aho: Fa hoy kosa Jakoba: Satria natahotra aho; fa hoy izaho: Fa raha tsy tsara toetra kosa ianao, dia mamitsaka eo am-baravarana ny ota; ary ianao no kendren’ny faniriany, kanefa ianao no tokony hanapaka azy. Jehovah Tompo ô, inona no homenao ahy? Jehovah hitazana ahy sy ianao, rehefa tsy mifankahita isika.
Baibolg izao ataon’Andriamanitra amintsika izao? Izaho koa nanonofy, ka, indro, niloloha karaba telo feno mofo fotsy aho; 17 ary teo anatin’ny karaba ambony indrindra dia nisy ny fihinan’i Farao samy hafa karazana rehetra fanaon’ny mpanao mofo; ary nohanin’ny vorona teo anatin’ny karaba izay nololohaviko izany.
Maroa fara sy mihabetsaha ary mamenoa ny tany, ka mampanompoa azy; ary manjaka amin’ny hazandrano ao amin’ny ranomasina sy ny voro-manidina ary ny biby rehetra izay mihetsiketsika ambonin’ny tany. Ary ny Kananita no tompon-tany tany Kanana fahizay. Ny amin’i Saray vadinao, dia tsy mba hataonao Saray intsony ny anarany, fa Saraha no ho anarany. Tsy ho faty tsy akory ianareo; 5 fa fantatr’Andriamanitra fa na pdt andro hihinananareo azy dia hahiratra ny masonareo, ka ho tahaka an’Andriamanitra ianareo, hahalala ny ny tsara sy ny ratsy.
Aoka ho ahy ihany anaka, ny ozona ho anao; araho ihany ny teniko, ka mandehana, itondray aho. Nofiko fa indro, hono, nitsangana teo amoron’i Neily aho; 18 koa, indreo, nisy ombivavy fito matavy sady tsara tarehy abiboly avy teo Neily; ary nihinana teny amin’ny bararata ireny. Andeha Isika hamorona olona tahaka ny endritsika, araka ny tarehintsika ; ary aoka izy hanjaka amin’ny hazandrano ao amin’ny ranomasina sy ny voro-manidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin’ny tany.
Inona izao nataonao taminay izao? Dia hoy izy ireo indray: Izany no nanaovana ny anaran’ny tanàna hoe Zoara. Dia nataoko teo anorony ny kavin’orona, ary ny haba teny amin’ny tànany. Lehibe ny valin’ny heloko mihoatra noho izay zakako. Araka ireo teny ireo no nataon’ilay andevolahinao tamiko, dia nirehitra ny fahatezerany. Efa namono lehilahy aho noho ny feriko, Ary tovolahy noho ny faharatrako. Mba hahitako fitia eto imason’itompokolahy. Ahoana no anontanianao ny anarako?
Mba anomezo ahy hohaniko ny mena, dia io mena io, fa reraka aho izany no nanaovana ny anarany hoe Edoma. Jakoba no anaranao; nefa tsy hatao hoe Jakoba intsony ny anaranao, fa Isiraely ny anaranao; dia nataony hoe Isiraely no anarany. Ry Hagara, andevovavin’i Saray, avy taiza ianao? Angamba tsy hety hiaraka amiko ho amin’ity tany ity ny vehivavy; moa tsy maintsy hitondra ny zanakao hiverina ho any amin’ny tany izay nialanao prf aho?
Iza ary ilay naka haza ka nitondra teto amiko, ary efa nihinanako izany rehetra izany, fony tsy mbola tonga ianao, ka efa notsofiko rano izy; eny, hotahina tokoa izy.